Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Brezila » Frantsa dia nanambara andiana fameperana COVID-19 vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Minisitry ny fahasalamana frantsay, Olivier Veran
Manomboka amin'ity herinandro ity, tsy maintsy atao indray ny saron-tava any amin'ny toerana anatiny rehetra any Frantsa ary, mandritra ny vanim-potoanan'ny fety, any amin'ny tsena Krismasy ivelany.
Minisitry ny fahasalamana any Frantsa, Olivier Veran, androany dia nanambara andiana fameperana anti-coronavirus vaovao manerana ny firenena natao hanoherana ny onjan'ny COVID-19 fahadimy.
Araka ny filazan'ny minisitra, ny fepetra vaovao, anisan'izany ny fitakiana saron-tava ho an'ny efitrano anatiny sy ny baiko ny olon-dehibe rehetra haka tifitra booster ho an'ny fahazoan-dàlana ara-pahasalamany, dia ampahany amin'ny ezaka hisorohana ny firongatry ny hopitaly COVID-19 sy ny fahafatesan'ny olona nefa tsy mamerina an'i Frantsa. ao anaty hidy.
Manomboka ny asabotsy 27 novambra, ny olon-dehibe rehetra ao Frantsa dia hahazo fitifirana fampiroboroboana vaksiny COVID-19, izay takiana amin'ny 15 Janoary mba hahazoana antoka fa mbola manan-kery ny pasipaorony ara-pahasalamana.
Ny olona mihoatra ny 65 dia efa nasaina nitifitra ny vaksiny COVID-19 fahatelo tamin'ny 15 Desambra.
Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny fahazoan-dàlana ara-pahasalamana Frantsa mba hidirana amin'ny toerana anatiny, toy ny trano fisakafoanana sy trano fisotroana.
antony Nanampy izy fa ny governemanta dia tsy hanaiky fitsapana ratsy atao ao anatin'ny 72 ora aorian'ny fahatongavana ho solon'ny COVID pass. Raha ny tokony ho izy, ny fitiliana COVID-négatif dia tsy maintsy atao ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fidirana.
Na eo aza ny fepetra vaovao, ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Jean-Michel Blanquer dia nanapa-kevitra ny hanidy sekoly raha sendra ny valan'aretina COVID-19, ary nilaza fa ny mpianatra ihany no takiana hanao fitiliana.
Frantsa dia nahita tranga COVID-19 nitombo tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, ka 32,591 ny otrikaretina vaovao voarakitra tamin'ny alarobia.
Na dia eo aza ny 76.9%-n'ny mponina ao Frantsa dia vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19, ny tahan'ny trangan'ny firenena dia nahatratra efa ho 200 ny otrikaretina vaovao isaky ny olona 100,000.